IATA waxay ku boorisay dowladaha inay raacaan Hagaha WHO ee Safarka Caalamiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » IATA waxay ku boorisay dowladaha inay raacaan Hagaha WHO ee Safarka Caalamiga ah
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • dhaqanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Xuquuqda Aadanaha • Wararka Raaxada • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Sports • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Tilmaanta WHO waxay ku talineysaa “hab ku saleysan qatar” si loo hirgeliyo tallaabooyinka la xiriira COVID-19 iyo socdaalka caalamiga ah.
Ha u baahnayn caddeyn tallaalka COVID-19 oo ah xaalad khasab ah gelitaanka ama bixitaanka.
Ka saar tallaabooyinka sida baaritaanka iyo/ama shuruudaha karantiil ee socdaalayaasha si buuxda loo tallaalay ama uu hore u xaqiijiyay caabuqa COVID-19 lixdii bilood ee la soo dhaafay.
Hubi waddooyin kale oo loogu talagalay dadka aan la tallaalin iyada oo loo marayo imtixaan si ay u awoodaan inay u safraan caalamka.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) wuxuu ugu baaqay dawladaha inay raacaan tilmaamaha cusub ee safarka laga bilaabo Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). Tilmaamuhu wuxuu ku talinayaa “hab ku saleysan qatar” si loo hirgeliyo tallaabooyinka la xiriira COVID-19 iyo socdaalka caalamiga ah. Waxaa loo soo bandhigi doonaa Guddiga COVID-19 Guddiga Degdegga ah ee Xeerarka Caafimaadka ee Caalamiga ah Khamiista 15ka Luulyo.
Gaar ahaan, WHO waxay ku talisay in dawladaha:
Hubi waddooyin kale oo loogu talagalay dadka aan la tallaalin iyada oo loo marayo imtixaan si ay u awoodaan inay u safraan caalamka. WHO waxay ku talineysaa baaritaannada rRT-PCR ama ogaanshaha antigen baaritaannada ogaanshaha degdegga ah (Ag-RDTs) ujeeddadan.
Kaliya hirgalinta tijaabooyinka iyo/ama tallaabooyinka karantiil ee socdaalayaasha caalamiga ah “hab ku saleysan qatar” oo leh siyaasadaha imtixaanka iyo karantiilidda ayaa si joogto ah loo fiiriyaa si loo hubiyo in kor loo qaado marka aan loo baahnayn.
“Talaabooyinkan wax-ku-oolka ah, talooyinka halista ku saleysan ee ka imanaya WHO, haddii ay raacaan dawladaha, waxay u oggolaan doonaan safarka duulimaadyada caalamiga ah inuu dib u bilowdo iyadoo la yareynayo fursadda soo dejinta COVID-19. Sida ay xustay WHO-iyo sida xogta ugu dambeysa ee baaritaanka UK ay cadeyneyso-socotada caalamiga ah maahan koox halis badan marka loo eego COVID-19. 1.65 milyan oo tijaabooyin ah oo lagu sameeyay rakaabkii caalamiga ahaa ee yimid UK ilaa Febraayo, kaliya 1.4% ayaa laga helay COVID-19. Waa wakhti hore oo la soo dhaafay in dawladuhu ay ku daraan xogta geedi socodka go'aan qaadashada ee ku salaysan khatarta dib-u-furista xuduudaha, ”ayuu yiri Willie Walsh, Agaasimaha Guud ee IATA.